Dị Nkọwa: Ihe Nlekọta | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Onye na-ede ederede ederede iji mata ihe niile kwesịrị ịma nke ọma akụkọ edemede y ihe ọcha mebere ya. Ọbụlagodi, ọkachasị na mbido na ndị na - eto eto ode akwụkwọ, a na - ahụkarị ihe n’adịghị mma n’akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọrụ gị ọzọ bụrụ nke inwe ezigbo akụkọ, nọrọ ma gụọ isiokwu a nke anyị na-enye gị taa wee mara ihe bụ isi ihe mejupụtara akụkọ ọ bụla.
1 Mmalite nke akụkọ akụkọ
2 Njirimara nke akụkọ akụkọ
2.1 Ihe akuko
2.2 Ọnọdụ ikuku
2.3 Styledị ahụ
3 Onye na akowa ya na odide ya: ihe nkpu abuo di nkpa nke akuko akuko
3.1 Onye nkọwa
3.2 Ihe odide
Mmalite nke akụkọ akụkọ
Ugbu a ị matara ntakịrị ihe gbasara ụdị akụkọ ahụ, ị ​​kwesịrị ịma na o nwere mmalite. Anyị na-ekwu maka Etiti oge gboo, ma site na Europe, kọntinent ebe ọ malitere iji ya mee ihe na ebumnuche nke icheta ihe ndị mere eme, ọdịnala, ndị edemede bụ ndị dike, ndị isi ndị isi na ihe egwu ha ...
Otú ọ dị, ọ maara na, na Gris, Homer bụ onye kpatara ụdị akụkọ a, Agbanyeghị na ọ bụ agwa mara etu esi agwakọta ụdị dị iche iche (ejije, egwu egwu, ịkọ akụkọ ...) n’otu ederede, ihe ole na ole ndị odee na - enweta na ọkwa ọkachamara.
Ihe dị mma banyere nke a bụ na, mgbe ọrụ akụkọ a malitere ịpụta, ọ kpatara mmụba nke ndị na-eto eto chọrọ ịmalite ụdị edemede ahụ; ma imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ na-achọsi ike maka ya, n'ihi ya, e mepụtara ya ka anyị si mara ya ugbu a.
Njirimara nke akụkọ akụkọ
Na arụ ọrụ, onye na-ede akụkọ na-egosi ihe omume ma ọ bụ usoro ihe omume nke usoro ihe odide ndị dị na ohere enyere na oge ịmebere tupu oge ahụ. Ihe ndị a niile bụ ihe akụrụngwa nke akụkọ (nke anyị ga-ahụ n'uju karịa n'okpuru).
A na-amata akụkọ edemede site na iweghachi ụwa akụkọ ifo, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ ha dị eziokwu sitere n'aka eziokwu. Ọbụlagodi, ọ ka bụ akụkọ ifo n'ihi na onye ode akwụkwọ na-atụnye ụtụ oge ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ na-ebo ebubo eziokwu na nuances nke onwe ya wee kwụsị ịbụ 100% ezigbo.
Ihe ọzọ e ji mara ụdị ederede a bụ na a na-ejikarị onye nke atọ, ọ bụ ezie na onye nke mbụ na-agakarịkwa mgbe onye bụ isi sekpụ akụkọ bụ onye na-ede akwụkwọ ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụbu na akụkọ akụkọ ọ bụ ihe a na-ahụkarị amaokwu, taa nke kachasịkarị bụ na edere akụkọ ahụ kpamkpam na prose.
Ihe ndị mejupụtara akụkọ bụ ihe ndị a:
Onye nkọwa: Ọ nwere ike ịbụ mpụga nke omume ahụ, ọ bụrụ na ọ kọọrọ ihe omume na onye nke atọ na-esonyeghị na ha, ma ọ bụ n'ime, mgbe ọ na-akọ banyere ihe ndị mere na onye mbụ dị ka onye protagonist ma ọ bụ akaebe nke ihe ndị ahụ. Onye na - akọ akụkọ mpụga na - abụkarị onye na - akọ ihe niile maara ihe ma mara ihe niile banyere ihe odide niile mejupụtara ọrụ ahụ, gụnyere echiche ha na mmekọrịta chiri anya.
Agwa: Ha bụ ndị na-ebute ihe dị iche iche anyị na-ahụ ka a na-akọ na egwuregwu ahụ. E gosipụtara omume ya site na omume ya, mkparịta ụka ya na nkọwa ya. N'etiti ndị edemede ahụ, onye protagonist na-apụta mgbe niile, onye bụ onye na-ebu ibu nke ihe ahụ na onye na-emegide ya na-emegide ya. Ọzọkwa, dabere na ọrụ ahụ, anyị nwere ike ịchọta ihe odide nke abụọ ma ọ bụ obere.
Akuko akuko ma obu omume Ọ bụ usoro ihe omume na-eme na akụkọ ahụ. Ihe omume ma ọ bụ ihe omume ndị a dị na oge na ohere, ma hazie ya dịka usoro dị mfe dịka akụkọ ma ọ bụ akụkọ, ma ọ bụ karịa dị mgbagwoju anya, dị ka akwụkwọ akụkọ.
Na mgbakwunye na ihe ndị anyị hụrụla, enwere ndị ọzọ dịkwa mkpa n'ụdị edemede a, nke a na-akọwakarị, ọ bụghị naanị mgbe ị na-agụ ihe, kamakwa mgbe ị na-ede ihe. Ndị a bụ:
Ntọala ahụ metụtara ebe, oge, ọnọdụ ... nke nkata a ga-eme. Nke ahụ bụ, ị na-etinye onye na-agụ ya n’ọnọdụ maka ebe nkata ahụ dị, n’afọ ọ ga-ewere ọnọdụ, ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na otu agwa ndị ahụ si ebi.
Oge ụfọdụ, ndị ode akwụkwọ na-eleghara ihe ndị a anya, mana ha na-ahapụ ịkwa ahịhịa nke onye na-agụ ya, ka ha na-agụ, na-akpụpụta echiche nke ọnọdụ. Ọtụtụ oge ọ na-aghọ karịa nhọrọ ngwa karịa ihe a ga-enwerịrị.
Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa inyekwu ihe siri ike na nkata ebe ọ na-enye nuances nke na-enyere aka ịmepewanye ihe niile.
Styledị bụ ụzọ onye edemede si amalite na ụdị akụkọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka stampụ onye edemede, ụzọ o si eji asụsụ ahụ, akwụkwọ edemede ... Na nkenke, odide ya.
Onye ọ bụla na-ede akwụkwọ bụ ụwa, nke ọ bụla nwere otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ederede. Ọ bụ ya mere na, mgbe ị na-agụ ihe, ị nwere ike ịmasị ma ọ bụ gbanye akwụkwọ akụkọ, mana ọ bụrụ na ị were ụdị ọzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe mmetụta ndị ọzọ maka ya.
Dị ka ihe atụ, e nwere ndị edemede ha ji aka ha dee ọtụtụ okwu ha; ebe ndị ọzọ na-enweghị ike ime nke ahụ ma belata onwe ha ịbụ ndị na-akọwapụta nke ọma ka onye na-agụ ya nwee data niile ma weghachite n'uche ya ihe ọ gụrụ ka ọ wee nwee ike ịnụ ihe ndị odide ahụ nwere ike inwe.
N'ikpeazụ, nke ikpeazụ n'ime ihe gbasara akụkọ gbasara akụkọ bụ isiokwu. Nke a bụ metụtara ibé na ibé, Ndị ọzọ okwu, ọ ga-kọwara site akụkọ ihe mere eme n'onwe ya. Na dabere n'okwu ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye na mmekọrịta ịhụnanya, akụkọ ihe mere eme, onye nyocha (ma ọ bụ akụkọ mpụ), akụkọ sayensị, isiokwu egwu ...
Ihe a niile dị mkpa ịmara ebe ọ bụ na, ọbụlagodi na akụkọ dị n'etiti etiti isiokwu abụọ, ọ dị mma mgbe niile ịmara ebe ị ga-esi mee ya, ka ndị na-agụ ụdị a wee chọta ya, ka ị wee nwee ike ịgakwuru ndị mbipụta dị iche iche ma ọ bụ bipụta ya ma họrọ ndi kwesiri ya.
Onye na akowa ya na odide ya: ihe nkpu abuo di nkpa nke akuko akuko
Ọ bụ ezie na tupu anyị agwa gị gbasara onye na-akọ akụkọ na mkpụrụ edemede, abụọ n’ime ihe ndị kachasị mkpa gbasara ụdị akụkọ a, anyị ga-achọ ịmatakwu banyere ha. Ha bụkwa dị ka ma ọ bụ dị mkpa karịa akụkọ nchịkọta onwe ya. N'ezie, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ a bụ nke mbụ ma bụrụ nke a na-eche echiche nke ọma, ọ bụrụ na onye na-akọ akụkọ enweghị ike idobe onye na-agụ ya, na esiteghị na mkpụrụ edemede ahụ n'ụzọ ziri ezi, akụkọ ahụ niile nwere ike ịkụda mmụọ ma daa mmiri.
Ọ bụ ezie na anyị ekwuola na onye na-akọ akụkọ n'ụdị akụkọ a na-edekarị ya na onye nke atọ, ma ọ bụ ọbụna na onye mbụ (ma otu), eziokwu bụ na enwere ike ide ya na onye nke abụọ. Iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịghọta:
Onye mbu: Onye na-akọ akụkọ ahụ bụkwa onye bụ isi na akụkọ ahụ, nke na-eme ka ọrụ dum na-elekwasị anya na ya onwe ya, iji mụta banyere mmetụta, echiche na omume ndị a na-ahụ.
Nke a nwekwara nsogbu, na nke ahụ bụ na ị gaghị enwe ike ịzụlite ihe odide ndị ọzọ n'ụzọ zuru ezu ebe ọ bụ na ị ga-elekwasị anya n'ihe onye isi agwa na-eche / na-eme / na-egosipụta.
Onye nke abuo: Ejighi ya ụdị a, mana ị na-ahụ akwụkwọ ebe eji ya, ọ na-eme nke ahụ iji gị dị ka ntụnye aka, metụtara mmadụ, ihe ma ọ bụ anụmanụ.
Onye nke atọ: A na-ejikarị ya eme ihe n'ihi na ọ na-enye ohere ịmepụta ihe odide niile na eziokwu niile. Ọ bụ ụzọ ndị na - agụ ya ga - esi gosipụta ọmịiko n’abụ, kama ọ na - agụkwa onye ọ bụla n’ime ha. N'ụzọ dị otú a, ọ na - abụ naanị onye nkiri na - akọ ihe na - eme, ha na - ekwu, ahụmịhe ndị ahụ, ma ndị protagonists na ndị nke abụọ, ụlọ akwụkwọ mahadum ...
N'ihe banyere ndị na-agụ akụkọ, dị ka ị maara, ọrụ nke otu akụkọ nwere ike inwe ọtụtụ ihe odide. Mana onwere otutu onu ogugu ichi ha. Ndị a bụ:
Onye ntughari: Uma nke akuko a na-eme. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ olu abụ nke ọrụ ahụ. Nke a protagonist bụ fọrọ nke nta mgbe onye, ​​anụmanụ, ihe ... Ma naanị otu. Agbanyeghị, na akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ enweela ọtụtụ ọrụ ebe, kama ịbụ otu onye na-agụ akụkọ, enweela ọtụtụ.
Onye na-emegide ya: Dị ka ha na-ekwu, dike ọ bụla chọrọ onye ọjọọ. Onye na-emegide ya bụ "onye ọjọọ ahụ", onye na-emegide onye na-akwado ya na onye chọrọ ka ọ ghara imeri. Ọzọ anyị na-alaghachi na nke a dị n'elu, ọ bụ naanị otu "ọjọọ" ka ọ dị, mana enwere ọtụtụ ọrụ nke karịrị otu.
Dynamic agwa: Wayzọ a nke ịkpọ ya bụ otu ị ga - esi kọwaa ihe ndị dị mkpa dị mkpa. Ha bụ ihe odide ndị mejupụtara iji nyekwuo ike dum, mana nke ahụ, na-agbasi ike ma soro ndị protagonists na ndị na-emegide ya, ha ghọrọ ngwa ọrụ dị ike iji duzie usoro nke akụkọ ahụ gaa ebe ịchọrọ.
Kpụrụ mara: Anyị nwere ike ịsị na ha bụ ndị isi ụlọ akwụkwọ, ndị edepụtara oge ole na ole mana ha enweghị nnukwu onyinye na akụkọ ahụ, mana ọ bụ naanị ụzọ esi achọpụta ibé ahụ na ihe odide ahụ, mana na-enweghị emetụta ha.
Nke ahụ kwuru, olee akụkụ kachasị sie ike nke akụkọ ịkọwapụta? You bụ otu n'ime ndị mbụ nwere ibé ma tinyezie mkpụrụedemede ma ọ bụ otu ọzọ? Gwa m nkenke etu ị si agakwuru ọrụ gị na mbido ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Dị akụkọ: Ihe dị iche iche nke akụkọ
Fernando Cuestas ebe obibi oyiyi dijo
Carmen, olee ebe m ga-edegara gị akwụkwọ?
Zaghachi Fernando Cuestas
Oe, gini na eme gi na nne m enwe qliao i gha funao na cana maka ili
Zaghachi Corxea Champuru
wenas cabros del yutu m corxea champuru denye aha na uzo m yutu na akparamagwa niile
oe dog qliao onyonyo nke nwa agbogho m sere ya enwe ctm etsijo copirai
obere akwa eze dijo
Zaghachi ka huevito rey
ezigbo kabros ktm
ntinye akwukwo maka biko
ElPepe (Abụ mElPepeOriginal) dijo
Na-atụ gị, M tụrụ anya ọzọ ụdị ihe na-ekwu okwu ma ọ bụrụ na ị
Zaghachi ElPepe (SoyElPepeOriginal)